“Ma dooneyno in Liverpool ay ku guuleysato horyaalka Premier League laakiin…” – Pogba – Gool FM
Dajiye February 25, 2020
(Manchester) 25 Feb 2020. Ciyaaryahanka reer France iyo kooxda Manchester United ee Paul Pogba ayaa ammaanay kooxda Liverpool taas oo xagaagan daah ka saarneen in ay ku guuleysaneyso horyaalka kubadda cagta England, oo ay ugu dambeysay 30 sano ka hor.
Laakiin Paul Pogba ayaa qiray in ay marmaba raali ka aheyn in Anfield la geeyo horyaalka Premier League.
Pogba ayaa ka maqnaa garoomada tan iyo kulamadii Boxing Day, isagoo la dhibaatoonaya dhaawac, inkastoo mustaqbalkiisa garoonka Old Trafford uu shaki weyn hareeyay.
Maqnanshiyahiisiina, Man United ayaa noqotay kooxda kaliya ee dhibic ka qaadatay Liverpool kaddib ciyaar ka dhacday Old Trafford bishii December, laakiin bishii tagtay Reds ayaa 2-0 Anfield kaga adkaatay Red Devils.
Haddaba, Paul Pogba oo la hadlyay “ESPN” ayaa sheegay in uusan dooneyn in markii ugu horeysay uu arko Liverpool oo horyaalka qaadeysaa, walow uu sheegay in ay u qalmaan.
“Waxay haatan ka sarreeyaan qof walba” ayuu yiri Pogba.
“Ilaa iyo iminka ma jiro hal kullan oo qasaaro soo gaaray, had iyo jeerba hal gacan ayeey ku hayaan horyaalka.”
“Ka xiddig Manchester United ahaan iyo xifaaltanka innoo dhaxeeya, marnaba ma dooneyno inay ku guuleystaan horyaalka”.
“Ma dooneynno cid kale inay inaga guuleysato anaga mooyee, laakiin anigoo ah qof jecel kubadda cagta isla markaana ixtiraam u haya kooxda naga soo horjeedda, waa inaan dhahaa waxay u qalmaan inay joogaan halka ay maanta joogaan”.